स्पेनमा एउटा विशेष आकर्षणको साथ urban शहरी पार्क यात्रा समाचार
जाडोमा, सूर्यको प्रकाश र तापको फाइदा उठाउँदा कुनै प्रकारको बाहिरी गतिविधिहरू गर्न सजिलो हुन्छ। चाहे साधारण पैदल यात्राको लागि वा खेलको अभ्यासको लागि, हाम्रो शहरहरूको शहरी पार्कहरूले हामीलाई प्रकृतिसँग सम्पर्कमा रहन र विच्छेदन हुने सम्भाव्यता प्रदान गर्दछ। शहरको हलचल र दैनिक जीवनको तनावबाट केहि समय भयो।
स्पेनमा त्यहाँ धेरै पार्क र बगैंचा छन् जहाँ तपाईं घरबाट टाढा एक दिनको मजा लिन सक्नुहुन्छ तर यी सँग एक विशेष आकर्षण छ जुन आगन्तुकहरू र स्थानीयहरूलाई खुशी पार्दछ। जम्प पछाडि हामी तपाईंलाई तिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं।
1 गुइल पार्क
2 मारिया लुइसा पार्क
3 राम्रो सेवानिवृत्ति पार्क
4 अलेमेडा पार्क
5 तुरिया गार्डन
बार्सिलोनाको एन्टोनियो गौडेको आधुनिकतावादी विरासत केवल मनमोहक छ: कासा बट्टे, सगरडा फामिलिया, कासा मिली… यद्यपि, प्रसिद्ध क्याटालिन वास्तुकारले भवनहरू मात्र होइन तर बगैंचामा उनको रचनात्मकता पनि खोल्यो। उनको कल्पनाको परिणाम स्वरूप, पार्क गोएल देखा पर्‍यो, ठाउँले युनेस्कोले १ 1984।। मा विश्व सम्पदा घोषणा गर्‍यो र १ 17 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्र मोसाइक, लहर र ज्यामितीय आकारले भरिएको थियो र प्रकृतिबाट प्रेरित थिए।
पार्क पार्कमा हामी के भेट्न सक्दछौं? मुख्य प्रवेशद्वारमा त्यहाँ दुई घरहरू छन् जुन कथा जस्तो देखिन्छन्। कासा डेल गार्डा पार्कको विगतमा अडियोभिजुअल प्रदर्शनहरू होस्ट गर्दछ जबकि अर्को घर स्टोरको रूपमा कार्य गर्दछ। भेट्न जान्ने अर्को सब भन्दा चाखलाग्दो ठाउँहरू पार्कको भित्र गौड हाउस संग्रहालय हो जहाँ कलाकार १ 1906 ०1925 र १ XNUMX २XNUMX बीचमा बस्थे।
पार्क Güll को केन्द्रबिन्दु एक विशाल वर्ग हो जुन मोज़ाइकले ढाकिएको ठूलो सरीसृप जस्तो बेन्च हो।
केहि बर्षको लागि, स्मारक क्षेत्रमा पहुँच भुक्तान गरिएको छ। टिकटहरू अनलाइन वा बक्स अफिसमा किन्न सकिन्छ (सामान्यको लागि €,, बच्चाहरूको लागि € 8० र वरिष्ठका लागि € 5,60.€०)।
सेभिलमा सबैभन्दा प्रतीकात्मक ठाउँहरू मध्ये एक मारिया लुइसा पार्क हो। यसको नाम राजा फर्नांडो सातौंकी कान्छी छोरीबाट प्राप्त भयो, जसले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेभिलको राजधानीमा बस्थे। उनका पति, मोन्टपेंसियरको ड्यूक उनीसँग स्यान टेल्मोको दरबारमा बस्थे र जब उनी मरे, शिशुले शहरमा दरबार मैदानहरू दान गर्‍यो। यो अप्रिल १,, १ 18 १। मा सार्वजनिक पार्कको रूपमा इन्फान्ट मारिया लुइसा फर्नाडा अर्बन पार्कको नामले उद्घाटन गरियो।
पेरिसको बोलोन जंगलका क्युरेटर फ्रान्सेली इन्जिनियर जीन-क्लाउड निकोलस फोरस्टियरले गरेका सुधार पछि, मारिया लुइसा पार्कले जेनिलाफ बगैंचा, अल्हाम्ब्रा र सेभिलको अल्जाजारेसबाट प्रेरित रोमान्टिक स्पर्श प्राप्त गरे।
मारिया लुइसा पार्कको केन्द्रीय अक्ष माउन्ट गुरुगा, शेरहरूको फोहरा, इस्लेटा डे लॉस पाटोस, लोटस पोन्ड र बाक्वेर गोलमालाबाट बनेको छ जसलाई कवि गुस्ताभो एडलफो बाक्वेरलाई समर्पित छ।, जसमा कविको बस्ट पछि, प्रेमको विषयवस्तु विकसित गरिएको छ।
यो सेभिलको प्राकृतिक रत्नहरू मध्ये एक हो जहाँ हामी सेभिल राजधानीको शहरी जीव जन्तुहरू देख्न सक्छौं जस्तै बतख, हंस वा मोर।
राम्रो सेवानिवृत्ति पार्क
शताब्दीयौं अघि पार्क् डेल बुएन रेटेरो म्याड्रिडको बाहिरी इलाकामा अवस्थित थियो तर आज यसलाई डामर, भवन र कारको ज in्गलमा डुबाइएको छ। शहरको बीचमा यो हरियो फोक्सो पाउँदा राम्रो लाग्छ।
१२ 125 हेक्टर र १ 15.000,००० भन्दा बढी रूखहरूको साथ, पार्क डेल बुएन रेटेरोको उत्पत्ति सत्रौं शताब्दीमा भएको थियो जब राजा फिलिप चौथोको वैध, ओलिभरेसको काउन्ट-ड्यूकले शाही परिवारको विशेष प्रयोगको लागि राजालाई केही जग्गा दिए। त्यहाँ राजाहरू खुला हावामा दिनहरू बिताउन आए जब मौसम अनुकूल थियो र बाँकी जनतामा यसको पहुँच प्रतिबन्धित थियो सन् १ 1868। को गौरवशाली क्रान्ति पछि यो नगरपालिकाको सम्पत्ती भयो र सबै नागरिकहरूको लागि खोलियो।
आज यो म्याड्रिडको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल हो। यहाँ हेर्नको लागि सब भन्दा चाखलाग्दा ठाउँहरू: पोखरी, क्रिस्टल दरबार, भेलाक्जिज दरबार, भिभास बगैंचा, सेसिलियो रोड्रिगिजको बगैंचा र गुलाब बगैचा, आर्किटेक्ट हेरेरो पालासियोसको बगैचा र साइप्रस काल्भोसँग पार्टर फ्रान्सेस, मेक्सिकन मूलको म्याड्रिडको सब भन्दा पुरानो रूख जुन करिब 400०० वर्ष पुरानो भनिएको छ। त्यहाँ पछाडि हिड्ने वा बाइक राइड लिन नहुने कुनै बहाना छैन यसको आनन्द लिन!
सान्टियागो डे कम्पोस्टेलाको क्याथेड्रलको अन्तिम खण्डमा, विश्राम लिन र विश्राम लिनका लागि उत्तम ठाउँ पार्की डे ला एलेमेडा हो।, जुन तीन फरक-फरक भागहरू मिलेर बनेको छ: पासेओ डे ला हेरददुरा, पासेओ डे ला अलामेडा र कार्बालेरा डे सान्ता सुसाना।
शहरको एसईओको धेरै नजिक, यसको स्थान विशेषाधिकार पाएको छ र समयको साथसाथै यो स्यान्टियागोको मुख्य सहरी बगैचा र थुप्रै स्थानीयहरूको मनपर्दो स्थान भयो। यसका वनस्पतिहरू र यसका उल्लेखनीय उन्नाइसौं शताब्दी र आधुनिकतावादी भवनहरूको साथ साथै यसको मूर्तिकलाहरू र मूर्तिहरूको मनन गर्दै हिंड्नको लागि। निस्सन्देह, एक आराम र स्वागत ठाउँ जुन प्रकृतिमा रमाइलो गर्न।
यो स्पेनको सब भन्दा ठूलो सहरी पार्क हो, ११० हेक्टेयरको साथ जुन व्यावहारिक रूपमा सबै भ्यालेन्सियालाई पार गर्दछ, र देशभरि भेटिने मध्ये एक हो।
टुरिया बगैचाको जन्म भएको थियो जब एउटा ठूलो बाढीले खाली ठाउँलाई जन्म दियो जसले नागरिकहरूको आरामका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो। सयौं व्यक्तिहरू सप्ताहन्तमा बिताउन यहाँ आउँदछन् र कला र विज्ञानको अभान्त गार्ड शहरको भव्य दृश्यहरूले घेरेको बाहिरी पिकनिकको आनन्द लिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » Urban शहरी पार्कहरू स्पेनमा विशेष आकर्षणको साथ